यस्तो छ देशव्यापी कोरोना खोप दिने सरकारको तयारी – Health Post Nepal
२०७७ माघ ७ गते १५:००
भ्याक्सिन आयो भने‌…
सबै नेपालीले कोरोना खोप पाउँछन्, मन्त्रालयले पहल गर्दै छ : डा.जागेश्वर गौतम
भारत सरकारले नेपाललाई १० लाख डोज खोप अनुदानमा दिने भएको छ।
खोप भोली बिहान (बिहिबार) नेपाल आइपुग्ने छ।
भारतमा सेरम इन्स्टिच्युटको कोभिसिल्ड र भारत बायोटेकको कोभ्याक्स खोप प्रयोगमा आएको छ।
नेपालमा कोभिसिल्ड खोप आउने स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताए।
भारतले १० लाख डोज खोप अनुदानमा प्रदान गर्न लागेको मन्त्री त्रिपाठीले बताए। जुन खोप २ डोज लगाउनुपर्ने छ।
पहिलो चरणमा ५ लाख मानिसलाई खोप दिइने उनको भनाई छ।
पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक दिइने छ।
‘पहिला प्राथमिकता स्वास्थ्यकर्मी र कोरोनाको फन्टलाइनमा खटिएका व्यक्तिलाई खोप दिइने छ,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘ त्यसपछि जोखिमको आधारमा अन्य वर्ग क्रमश दिनेछौं।’
नेपालको कूलको जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई खोप दिने तयारी भइरहेको त्रिपाठीले बताए।
कानुनी, प्रशाशनिक, आर्थिक र प्राविधिक समस्या हल भइरसको र खोप लगाउनको लागि सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न भएको उनले त्रिपाठीले बताए।
बाँकी खोपको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिए।
खोप खरिद प्रक्रिया पारदर्शी हुने उनले दावी गरे।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले खोप अभियान ७७ जिल्लाबाट एकैसाथ सञ्चालन हुने बताए।
बुथ राखेर खोप सञ्चालन
मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा बुथ राखेर खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
दिनमा एक बुथबाट १ सयजनालाई खोप दिइने छ।
‘धेरै स्वास्थ्यकर्मी भएका ठाउँमा हामी बुथ थपेर खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं,’ डा. गौतमले भने।
उपत्यकामा पनि कुनै ठाउँ केन्द्रित गरेर खोप दिइने छ।
८ हजार स्वास्थ्यकर्मी परिचालन
खोप लगाउन पहिला खोप कार्यक्रममा समावेश भएका स्वास्थ्यकर्मी नै हुनेछन्।
त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीका लागि जिल्लागत तालिम चलिरहेको छ।
करिब ८ हजार स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइरहेको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ।
‘पहिला खोप लगाइरहेकालाई तालिम दिएर खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ,’ डा. गौतमले भने, ‘खोप लगाउने स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइरहेका छौं।’
गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेका महिलालाई खोप नदिइने
सरकारले कोरोना खोप १८ वर्षभन्दा कम उमेर, गर्भवती, स्तनपान गराइरहेका महिला र एलर्जी समस्या भएकालाई दिनेछैन।
स्वास्थ्यकर्मीका हकमा भने खोप लगाउँदा वा नलगाउँदा हानी हुने विषय हेरेर दिइने डा. गौतमले जानकारी दिए।
‘कोभिड वार्डमा काम गर्ने गर्भवती महिला हुनुहुँदोरहेछ भने खोप दिइन्छ,’ उनले भने, ‘नत्र, सामान्यतयाः अन्य गर्भवती महिलालाई खोप दिइने छैन।’
खोप लगाएपछि ३० मिनेट अवलकोनमा राखिने
पहिलोपटक ०.५ मिलिलिटर परिमाणमा खोप दिइने छ। कोरोना खोप लगाएपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई ३० मिनेट अवलोकनमा राखिने छ।
तर, केही समस्या वा साइड इफेक्ट भए थप उपचारका लागि कहाँ लैजाने, के गर्ने भन्नेबारे सबै तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
‘खोप दिइसकेपछि ३० मिनेट अवकोलनमा राखिन्छ। समस्या परे कहाँ सम्पर्क गर्ने हो, त्यो व्यवस्था गरेका छौं,’ डा. गौतमले भने।
स्वेच्छाले खोप लगाउने, जिम्मेवारी सरकार नहुने
खोप लगाएपछि केही समस्या भए त्यसपछिको उपचार सरकारले नै गर्ने छ। तर, मृत्यु भएमा त्यसको जिम्मेवारी भने सरकारको नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले बताए।
कोरोना खोप स्वेच्छाले लगाउने हो। कसैलाई पनि खोप लगाउन बाध्य नपारिने उनको भनाइ छ।
‘खोप खुसीले लगाउने कुरा हो। कसैलाई पनि करकापमा पारिँदैन। केही समस्या भए सरकारले थप उपचार गर्छ,’ डा. गौतमले भने, ‘तर, मृत्यु भएको खण्डमा सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिँदैन।’
नेपालसँग भण्डारण क्षमता कति छ?
पहिलो २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने भण्डारण क्षमता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘सरकारले २ देखि ८ डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्न मिल्ने भ्याक्सिन ल्याउन सके नेपालमा अहिले भएका कोल्डरुम पर्याप्त छन्,’ डा. गौतमले भने, ‘त्यसका लागि मन्त्रालयले केन्द्रमा भ्याक्सिन राख्ने क्षमता, भ्याक्सिन स्टोर र उपत्यका बाहिरका जिल्लामा भ्याक्सिन पु-याउन रेफ्रिजिरेटर भ्यान तयार गरिसकेको छ।’
मन्त्रालयका अनुसार २ देखि ८ डिग्री तापक्रममा भण्डारण गर्नका लागि ७ हजार ५ सय र ३ हजार ७ सय ५० लिटर भण्डारण क्षमता भएको कोल्डरुम तयारी अवस्था राखिएको छ।
उक्त कोल्ड रुम एउटामा २८ लाख ७३ हजार ५ सय ६० डोज र अर्कोमा १३ लाख ४१ हजार डोज भ्याक्सिन भण्डारण क्षमता छ।
त्यसैगरी, विराटनगरमा रहेका तीनवटा कोल्डरुममध्ये एउटा कोभिड भ्याक्सिनका लागि छुट्टयाइएको छ। उक्त कोल्डरुममा २ हजार २ सय ५० लिटर क्षमता छ। जसमा ८ लाख ६२ हजार डोज भ्याक्सिन भण्डारण गर्न सकिन्छ।
मन्त्रालयका अनुसार पथलैया, बारामा रहेका तीनवटै स्टोरमा कोभिड भ्याक्सिन भण्डारण गर्ने तयारी छ। त्यहाँबाट विराटनगर, हेटौंडा र प्रदेश २ समेटिने छ।
तीनमध्ये दुइटा कोल्डरुममा ३ हजार ७ सय ५० लिटर भण्डारण क्षमता छ। जसका लागि तीनवटा रुम छुट्ट्याइएका छन्। पहिलोमा १४ लाख ३६ हजार ७ सय, दोस्रोमा ७ हजार ५ सय र तेस्रोमा २८ लाख ७३ हजार ५ सय डोज भ्याक्सिन भण्डारण क्षमता छ।
पोखरा, बुटवल र धनगढीमा एउटा कोल्डरुम कोभिड भ्याक्सिनका लागि छुट्टयाइएको छ। २ हजार २ सय ५० लिटर क्षमता भएको उक्त रुममा ८ लाख ६२ हजार डोज भ्याक्सिन भण्डारण गर्न मिल्छ।
नेपालगन्ज र सुर्खेतमा ३ हजार ७ सय ५० लिटर क्षमताका कोल्डरुम तयार गरिएको छ। जहाँ १४ लाख ३६ हजार ७ सय डोज भ्याक्सिन भण्डारण क्षमता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
Tags: कोरोना खोप, सरकारको तयारी